Xaqiiq iyo Gorfeyn: Gobolka BANAADIR xalaaleeyn buu u baahanyahay! - Caasimada Online
Home Warar Xaqiiq iyo Gorfeyn: Gobolka BANAADIR xalaaleeyn buu u baahanyahay!
Xaqiiq iyo Gorfeyn: Gobolka BANAADIR xalaaleeyn buu u baahanyahay!
“Rag walaaloow wuxuu ku dhaamo la waa!”
Akrisoow, marka hore Qormadu waxeey dulmar yar ku sameeyndoontaa taariikhda mugga leh ee magaalada Muqdisho oo kooban, iyo deegaan ahaan sida loo dago, balse waxeey xoogga saaridoontaa Sad-Bursiga, Cadaalad-Darrada Qabyaaladeed iyo Eexda-Qabiil ee indho-la’aanta ah ee lagu hayo beelaha kalee gobolka wax kadaga markasta oo lamagacaabayo jagooyinka ugu muhiimsan ee Gobolka Banaadir iyo Magaalada Muqdisho, haba ugu sii darnaatee qaabka hadda uu Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud wax usoo magacaabay’e. Waxaan tilmaami doonnaa waxa ka khaldan ee sixidda u baahan, iyo waxa jagooyinka kala ah: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo tan Duqa Maqaalada Muqdisho loo kala qaadi la’yahay, ee markasta halka nin ee halka Juffo kasoo jeeda loogu wada dhoobo. Ugu dambeeyna waxaan kusoo gabagabeeyndoonnaa talabixin ku aadan sida xalka dhabta ah iyo cadaalada gobolka iyo tan magaalada Muqdishaba eey ku wada jiraan, ee Ka bogasho wacan
1-In magaalada Xamar eey aheyd xarun Diinneed oo Diinta Islaamka barashadeed loosoo doonanjirey, lagana faafinjirey. Sidaana waxaa looga dhisey Masaajidyo taariikhi ah sida: Arbaca-Rukun, Masaajidka Xamar-Weyne, oo taariikhdu leedahay waxaa la dhisey qarnigii 6-aad ee Hijriyada, qaarna ka hore ayeeyba sheegayaan. Waxeey ka koobneyd 6-Tuulo oo mashaa’ikh eey ka kala talinjireen, ugu dambeeyna isku biirey iyagoo sameeystey Gole Wadatashi.
2-In magaalada Xamar ahaan jirtey xarun Ganacsi oo caalamka meelo ka mid ah Dooman loogaga imaanjirey, iyadoo badeecooyin kala duwana wadamadaa looga keeni jirey, halka iyana sidoo kale wadamadaa badeecooyin looga qaadi jirey magaalada Xamar.
3-In magaaladu ahmiyad gaar ahna ku heshey in eey ku taalley meel aad muhiim Aduunka ugu aheyd (Strategic location) oo la isaga gooshi jirey Hindiya, Yurub iyo Bariga Africa, gaar ahaan inta aan la qodin Kannaalkii Suweys. Muhiimada eey laheyd meesha eey dhacdo Magaalada darteed ayaa xiliyo kala duwan waxeey aheyd xarun, sida xilligii Isticmaarka Talyaaniga oo eey sandhig dhinaca Koonfureed oo dhami u aheyd. Waxaa sidoo kale jirta in 1950-yadii xiligii ku meel gaarka Sal-Dhig aheyd, waa inta aan si rasmi ah looga dhigin Caasimad’e.
Sida caadiga iska ah, ee gobollada kalaba reeraha Soomaaliyeed u kala dagaan, ayaa Gobolka Banaadir-na asal ahaan ama taariikhiyan waxaa deegaan ahaan u daga sadex Beelood oo Soomaaliyeed, asalna lagu wada yaqaanney “Indigenous people”. Sadexdaasi waxeey kala yihiin: beelaha Mudulood, beelahav Murusade/Karanle/Sadex iyo Sagaal-Hadba sida aad u taqaan- iyo beelaha reer Banaadiriga. Iyagaa ayaa loogu yimid oo deegaankooda rasmiga ahi uu yahay. Walibana marka laga soo tago in eey beelahaasi wada daganyihiin sida Soomaalida kaleba hada u dagtey, labada beelood ee kala ah: Mudulood, iyo Murusade waxeey keenaan Xaabada iyo Caanaha Gobolka iyo Magaalada Muqdishaba, taasoo muhiimad gaar ah usii leh lahaanshaha deeqaan, waloow Soomaaliduba la wada socoto. Xaqu wuxuu ahaa in marka la magacaabayo madaxda maamulka Gobolka Banaadir iyo kuwa magaalada Muqdisho eey si xaqiiqdaa ka turjumeeysa oo waafaqsan uga wada muuqdaan iyada oo aan cidna la dulmineyn. Waxaa sidoo kale muhiim ah in reeraha kalee walaalahood ah ee gadaashood wax kasoo dagay gobolka, maantana aad tiradooda ugu badan tahay iyana kaalin mug leh lagasiiyo marka la magacaabayo jagooyinka maamulka Gobolka Banaadir iyo kuwa magaalada Muqdisho.
1-Horaa loo yiri “Sadaqo gurigaada ayey ka bilaabataa”. Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud ileyn waa Madaxweynaha Dalka oo dhame, waa in uu usoo jeestaa cadaallada dhabta ah, ileyn ruux deegaankii uu kasoo jeedey reerihii walaalaha ahaa ee wada daganaaba cadaallad darro kula kacaya, magarankarayo waxa Soomaaliweyn cadaalad uga filankarto, oo habayaraatee eey uga rajeeynkareeyso.
2-Waa in si degdeg ah loo kala qaadaa jagooyinkaa Gen. Muun-Gaab uu ku wada dhoobey sidii nin kaligii nool. Jagooyinkaa oo kala ah: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Duqa magaalada Muqdisho, Gudoomiye kuxigeenkii Gobolka Banaadir ee Dhanka Ammniga……… IWM.
3-Waa in Madaxweynuhu inta meel iska dhigo Quursiga qaawan ee uu Beeshiisa ku horboodayo uu ku dadaalo in la helo Xaq-Soor, taasoo asalkeedu yahay in beelahaa wada daga gobolka, wada leh ama loogu wada yimid sida: Mudulood, Beelaha reer Banaadiriga iyo beelaha Murusade ee sida xaqa ah eey tahay in eey u qabtaan jagooyinkaa si la mid ah sida eey uqabtaan “Markasta” kuwan lagu koobey, si looga gudbo Sad-Bursiga, Cadaalad-Darrada Qabyaaladeed iyo Eexda-Qabiil ee indho-la’aanta ah, ee aan danta u aheyn gobolka banaadir oo ah xarunta iyo miraayada Dalkoo idil. Weey kala duwantahay marka gobol lawada leeyahay danahiisa la isu garabsanayo “Hiil & Hooba” iyo marka loo wada shaqeeynayo reer jagooyinka Gobolka ugu muhiimsanaa oo dhan isku koobey oo isku wada gaaryeeley “Monopoly of Power”.
4-Ugu dambeyna, waa in beelahaa gobolka Banaadir kuwada dulman iyagoo isku duuban eey arintaa kawada dhiidhiyaan dhamaan: Madax-Dhaqameedyadooda, Madaxdooda Siyaasada, Aqoonyahankooda, Ganacsatadooda, Siyaasiyoontooda, Culumaa’uddiinkooda, Dhalinyaradooda, Haweenkooda iyo waliba guud ahaan dhamaan Soomaalida cadaalada jecel ee kala jooga dal iyo Dibadba, sidii arintaa wax looga badali lahaa dadaal dheer iyo waqtiba loo galinlahaa. Hadaan arintan si dhab ah loogu istaagin sideeda ayey ahaaneeysaa waligeed, oo wax isbadal ah ma imaanayaan.
Waa xaqiiq in dowladani aaneey ubaahneyn mucaarad kaloo horleh oo loosii abuuro, iyadoo waliba laga maarmi karo, maxaayeeley waxaa badan inta ku mucaaradsan dowladoo dhan Isir-Naceybka Madaxweyne Xassan, iyo maxaan kaaga weeyney Sab-Bursigii aan guud ahaan Soomaaliweyn uga baranney ee caadada inoo ahaa Abid. Madaxweyne Xassan-se waxaan ka rajeeyneynaa in uu uhiiliyo cadaalada gobolka. Talooyinkaa wax ku oolka ahna uu qaato. Isbadalkaa haboon ee laga sugayana degdeg ula yimaado-Allahuma Ballaqtu.